12 qof oo ku dhintay weerar lagu qaaday jarriirad ka soo baxda Paris - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
12 qof ku dhintay weerar lagu qaaday jarriirad ka soo baxda ParisFoto: AFP Photo / Philippe Dupeyrat / TT.
12 qof oo ku dhintay weerar lagu qaaday jarriirad ka soo baxda Paris
12 qof ayaa ku naf waayay, kadib markii maanta weerar loo geystey xarunta wargeyska Charlie Hebdo oo ku taalla magaalada Paris dalka Fransiiska. Weerarkan oo dhacay 11:30 , ayay gaysteen niman afka duuban, oo ku hubaysnaa hubka casriga ah. Dadka weerarkan ku dhintay baa kala ah 10 saxafi iyo 2 qof oo booliis ah.
Ma jirto cid illaa iyo hadda loo qabtay ama sheegatay weerarkan. Jarriiraddan Charlie Hebdo oo ah jarriirad wax ku tabisa sawirrada farshaxanka (satirteckning) ayaa xalay sawir ay ka samaysay hoggaamiyaha ururka jihaadiinta ISIS Abu Bakr al-Baghdadi. ku baahisay barteeda tuwiitarka ( Twitter ). Jarriiraddan ayaa hore sannadkii 2011 weerar bambaano ah loo gaystay, iyada oo walibana la jabsaday ama la afduubay barta ay intarnatka ku lahayd. Iyada oo loo malaynayo in weerarkaasi xidhiidh la lahaa kadib markii ay jarriiraddani sawir ka samaysay Nebi Maxamed ( scw ).
Weerarkan loo gaystay jarriiradda Charlie Hebdo ee ka soo baxda magaalada Paris ayaa walaac xooggan waxa ka bixiyay dadka Iswiidhishka ah. Wasiirka arrimaha dibadda Iswiidhan Margot Wallström ayaa barteeda Tuwiitarka ( Twitter) ku qortay sidan: ´´ Weerar argagixiso oo foolxun baa ka dhacay Paris, kaasi oo ay ku dhinteen dad badani. Kuwii falkani ka masuulka ahaa waa in sharciga la horkeenaa. Waana in la difaacaa xorriyatul-qawlka.´´ Dhanka kale wasiirka caddaaladda iyo soogalootiga, Morgan Johansson ayaa isna falkani ku tilmaanay weerar xun oo lagu qaaday xorriyatul-qawlka. Guddoomiyaha ururka saxafiyiinta Sweden (Svenska journalistförbundet (SJF).), Jonas Nordling ayaa si weyn u dhaleeceeyay falkan. Waxaanu sidoo kale sheegay in uu weerarkani yahay mid lagu qaaday xorriyatul-qawlka, loona baahan yahay in si adag loo dhaleeceeyo.
Xigasho: TT, Ekot, SR/ Twitter